Saacadda Biyaha Iyo Korontada ee La Wadaago | LawHelp Minnesota
Saacadda Biyaha Iyo Korontada ee La Wadaago
Halbeegyada Adeega La wadaago (PDF)312.3 KB
Waa maxay Saacadda Biyaha Iyo Korontada ee La Wadaago?
Saacaddu waxa ay cabirtaa imisa ayaad isticmaashay korontada, gaaska iyo biyaha. Saacadda la wadaago waa saacad kaligeed ah oo loogu talo galay 1 guri ama qol, iyo dhulka dibadda ka ah gurigaas. Dhulkaas ka baxsan waxa uu noqon karaa qol kale ama guri kale oo ka tirsan dhismaha ama guryaha isku xiran.
Tusaale saacadda la wadaago: dhisme ay hal saacad wadaagaan 2 guri, ama saacad 1 guri leeyahay oo lagu xisaabo dhismaha hoose oo dadka oo dhan uu wadaago. Haddii aad hubin in saacadaada lagula wadaago, weydii shirkaddaha biyaha iyo korontada in ay fiiriyaan oo kuu sheegaan.
Magacee lagu soo qorayaa biilka? Sidee loo bixinayaa?
Sharciga Minnesota waxa uu dhigayaa in kireeyaha uu mas’uul ka yahay bixinta biilasha saacadda la wadaago.
Biilka saacadda la wadaago laguma qori karo magaca kireystaha, marka laga reebo hal xaalad oo kaliya. Haddii saacadda biyaha iyo korontada ee guriga kireystaha ay ku jirto kharash yar oo ah korontada lagu isticmaalo dibadda guriga, oo raacsan isla guriga kireystaha. Kharash yar waxaa loola jeedaa laba nal oo ku yaala dariiqa guryaha u dhaxeeya. Sharcigani waxa uu gaar u yahay isticmaalka korontada, mid gaask iyo waxyaabaha kale lagu xisaabayo.
Ma aha in aad bixiso kharashka korontada iyo biyaha xisaab ku qoran magaca kireeyaha, oo ay ku mid yihiin saacad la wadaago.
Laakiin, haddii uu kireeyuhu aanu bixin biilka oo shirkadaha korontada iyo biyahana doonayaan in ay xiraan, waxaa laga yaabaa in aad ku khasban tahay in aad bixiso qeyb biilka ka mid ah si aan loo joojin adeegga. Haddii ay taasi dhacdo, lacagta aad bixisay waxa aad ka jari kartaa kirada soo socota (akhri hoos - Maxaan Yeelayaa Haddii Aanu Kireeyaha Bixin Biilashaha Oo La I Siiyo Ogeysiis In La Jarayo Ah?) La xiriir shirkadaha korontada iyo biyaha haddii aad aaminsan tahay in aad bixiso biilka saacad la wadaago.
Waxaa jira habab kala duwan oo aad ku bixin karto qeybtaada biilka ee saacad la wadaago. Kharashka korontada iyo biyaha waxaa la raacin karaa heshiiska kirada, ama waxa aad kireeyaha weydiisan kartaa in aad bixiso qeybta kaaga soo beeganta biilka haddii aan lacagta kirada lagu darin.
Kireeyaha waxa uu doonayaa in aan gaar u bixiyo saacad la wadaago. Waa maxay sharciyada arrintan ka yaala?
Haddii uu heshiiska kirada dhigayo in aad kireeyaha si gaar ah oo ka baxsan kirada kharashka saacad la wadaago, sharciyo ayaa ka degsan.
Marka aad codsato guri leh saacad la wadaago, waa in kireeyuhu ku siiyaa kharashka guud ee biyaha iyo korontada ee dhismaha. Ogeysiiska waa in ay ku cad yihiin qiimaha korontada iyo biyaha ee bil kasta ee sanadkii u dambeeyey.
Waa inuu jiraa heshiis qoraal ah oo ku cad heshiiska kirada oo si cadaalad ah loo qeybiyaa kharashka biyaha iyo korontada ee adiga iyo cidda kula wadaageysa saacadda korontada iyo biyaha.
Waa in ay ku caddahay heshiiska kirada, haddii aad weydiisato, waa in kireeyuhu ku siiyaa nuqul (koobi) biilka korontada iyo biyaha ee dhismaha iyo nuqul muujinaya sida loo qeybiyey.
Haddii aad weydiisato, waa in kireeyuhu ku siiyaa biilasha mudda aad deganeyd guriga ee biilasha la idiin kala qeybiyey.
Haddii heshiiska kirada uu yahay mid sanad ah ama ka badan, oo kireeyaha aanu kugu raacsaneyn qorshaha inta aad u qorsheysay. Waa in aad bixisaa lacag go’an oo bil kasta isku mid ah sanadka oo dhan. Waa mid ku saleysan qiyaasta biilasha ee sanadka oo dhan.
30Ka Siteembar ee sanad kasta, waa in kireeyuhu qoraal kuugu sheegaa Barnaamijka Gargaarka Degdegga ah ee Tamarta. Macluumaadka lagu siinayo waa inuu ku jiraa telefoonka lacag la’aanta ah ee xaaladaha degdegga ah.
Haddii aanu kireeyuhu u hogaansamin sharciga kor ku xusan, waajib kuguma aha in aad bixiso biilka ama aad lacag u celiso mulkiilaha.
Maxaan yeelayaa haddii aan bixinayo saacad la wadaago, laakiin ay aheyd in aanan bixin?
Haddii uu magacaaga ku qoran yahay biilka saacad la wadaago, waa in kireeyuhu bixiyaa. La xiriir shirkadda korontada iyo biyaha sida ugu dhaqsaha badan una sheeg dhibaatada. Waxa aad dacweyn kartaa mulkiilaha si aad lacagtaada uga soo ceshato. Codsigaaga waxaa ka mid noqon kara $500 ama 3 laab lacagta aad bixisay, hadba kii badan. Waxa kale oo aad qaaliga weydiisan kartaa in kireeyaha la amro inuu la wareego mas’uuliyadda biilka.
Xisaabta keydka ee Kirada ayaa ah nooc ay maxkamaddu amri karto in laguxaliyo dhibaatada. Ugu yaraan 14 cisho ka hor inta aadan dacwadda diiwan gelin, waa in aad ogeysiis qoraal ah siisaa kireeyaha ku saabsan saacadda la wadaago iyo lacagta aad bixisay. Nuqul ka reebo ogeysiiska aad siisay kireeyaha. Waxa kale oo aad shirkadaha korontada iyo biyaha iyo kormeeraha guryaha wargelin kartaa kireeyaha iyo saacadda la wadaago. Kormeeraha ayaa u qabanaya muddo go’an kireeyaha. Haddii taariikhda la dhaafo waxa aad maxkamadda u gudbin kartaa codsi ah in la furo xisaabta keydka kirada. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xisaabta kirada keydka, ka akhriso xogta urursan ee Ka Helida Qolada Gurigu Inay Hagaajiso Wixii Halaysan.
Maxaa dhacaya haddii aanu kireeyuhu bixin oo ogeysiis in la jarayo aan helo?
Haddii uu ku soo gaaro ogeysiiska in la jarayo korontada yo biyaha ku soo gaarop oo kireeyuhu aanu bixin, waxa aad maxkamadda ka diiwaan gelin kartaa amar degdeg ah oo aad ku codsabeyso in mas’uuliyadda lagaa daayo. Waxa kale oo lagu magacaabaa amarka degdegga ah ee ka dhaafidda mas’uuliyadda kireystaha (ETRA). Gaarsii kireeyaha ogeysiis 24 saac ka hor dhibaatada, iyo in aad dooneyso in aad dacwadka diiwaan geliso maxkamadda. Xog ururusan, Dhibaatada Dayactirka Degdegga ah, oo aad ka helikarto macluumaad dheeraad ah.
Waxa kale oo aad kireystaha siin kartaa ogeysiis 48 saacadood ah oo qoraal ah in aad dooneyso in aad maxkamadda dacwad ka diiwan geliso. Ogeysiiska qoraal ahaan ugu dir kireeyaha oo nuqul (koobi) ka reebo . Ka dib marka aad bixiso biilka, waxaa lagaa doonayaa in aad nuqul ka mid warqadda lacag bixinta u dirto mulkiilaha.
Macluumaad kale oo dheeraad ah waxa aad ka heli kartaa xog ururusan, Goynta Korontada Kolka Lacagta lagu leeyahay Qolada Gurga.
Maxaan yeelayaa haddii aan bixiyo saacad la wadaago ee meel horay u daganaa?
Haddii aad guri ka guurtay aad horey u bixin jirtay lacagta saacad la wadaago oo aheyd inuu bixiyo kireeyaha, waxa aad dacwad ka diiwaan gelin kartaa Maxkamadda Dacwadaha Madaniga Ah. Uma baahnid qareen haddii lacagta aad u dacwooneyso ay dhan tahay $15,000 ama ka yar. Haddii ay lacagtu ka badan tahayintaas, waxa aad ka dacwoon kartaa maxkamadda degmada.
Akhri xog ururusan ee Maxkamadaha Dacwadaha Madaniga.